Rita, Writing for My Sake!: Books!
Posted by Rita at 7/23/2011 01:12:00 AM
စာအုပ်တွေ အများကြီး ၀ယ်ခဲ့တယ်လား ရီတာ။ စိတ်ဝင်စားတယ်။ ၀င်းဝင်းလတ်၊ မြနှောင်းညိုနဲ့ လင်္ကာရည်ကျော်တို့ရဲ့ စာအုပ်တွေကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ လင်္ကာရည်ကျော်ကို နာမည်ပဲကြားဖူးနေတာ။ တစ်ခါမှ မဖတ်ရသေးဘူး။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီသုံးယောက်က ဆရာဝန်တွေချည်း ဖြစ်နေပါလား။
ချိန်းရ ပြန်လာပေးရ ပြန်လာယူရနဲ့ 
ဒီတော့ ကုသိုလ်လည်းရ ၀ယ်လာတာလည်း အလဟဿ မဖြစ်ရလေအောင် တနေ့တမျက်နှာနှုန်း စာရိုက်တင်ပေါ့ ဒါမှမဟုတ် တအုပ်လုံးဖတ်ပီးမှ အကျဉ်းချုပ်ပီး ဘရိဖင်တင် ပိုတောင် ဖတ်လို့ ကောင်းသေး ဇာတ်အစ အလယ် အဆုံးနည်းနည်းစီသိရင် တို့ က ဇာတ်ကွက်တခုလုံး အလိုလို နားလည်တဲ့ ပါရမီပါတယ် :P :P
အွန်လိုင်းက သိတဲ့သူတွေထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့ပိုးပိုးလေး အလိမ္မာဆုံးးးး အတော်ဆုံးးး
မင်းလူ - ပြန်ခေါ်သက်သေ .. ဆို တာမဖတ်ဖူးသေးဘူး ..။
ပို့စ် မှာ စာမြည်းများပါမလားဆိုပြီး .. အစ အဆုံး ပြန်ဖတ်ကြည့်သေးတယ်..။
ပြန်ခေါ်သက်သေ ကို အစ်မ မရွှေစင်ဦး http://www.shwezinu.com/ ဆီမှာ ရိုက်တင်ထားတာ ရှိပါတယ်။ အွန်လိုင်းက ဖတ်ရတာ ကြိုက်ရင်ပေါ့။ ပြီးလား မပြီးသေးလားတော့ မသိဘူး။
ကျတော်လည်း သည်တစ်ခေါက်အပြန် အများကြီးပါလာတယ် .. အသစ်တွေထက် ပြန်ဖတ်ဖို့ အဟောင်းတွေပြန်ယူလာတယ် ... နောက်အဟောင်းဆိုင်က ဒေါက်တာမတင်ဝင်း စောစောပိုင်းက အဟောင်းလေးတွေ ပြန်ရှာဝယ်လာတယ် ၊ နောက် ကိုယ်နဲ့မတန်တဲ့ ပျို့ တွေ :( ။ ဒေါက်တာသန်းထွန်း ဆိုလို့ သူ့ နယ်လှည့်ရာဇာဝင်ဆိုတာ ပါလာတယ် ။
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ စာအုပ်တွေကို မငှားချင်ဘူး နောက်ကျမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဆုံးမပြီး ဖတ်ချင်တဲ့ သူတွေကို ဂရုတစိုက်ကိုင်ဖို့တောင်းပန် ပြီးငှားတယ် ... ။ စာအုပ်နဲ့တန်တဲ့သူတွေဆီက ကျေးဇူးတင်စကားမျိုး ပြန်ကြားရတာလည်း ပီတိပါပဲ ... ။ အချို့ကျတော့ ဖတ်ကောင်းမယ်ထင်လို့ ကြားဖူးလို့ ငှားတာ ဘာတွေမှန်းမသိဘူး ဆိုကြတော့လည်း အောက်သက်သက်ပေါ့ဗျာ :(
ဖတ်စေချင်တဲ့သူတွေကို သူတို့ မငှားခင် ကိုယ်ကအရင် စငှားပြီး ပေးဖတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အိမ်မှာဆို အခန်းဖော်တွေ အားနာပြီး ယူမဖတ်မှာစိုးလို့ တချို့ဟာတွေ အပြင်တောင် ထုတ်ပေးထားတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီစာတန်းဟာလည်း လိုအပ်တယ်။ သုမနကျောမှာလည်း ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ဆရာရဲ့။ =)
ဒဏ်ကျေဆေး လိမ်းပေးပါ့မယ်..မသုမနရယ်.. :P